Vokovoko matevina | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Vokovoko matevina
Varimbazaha karokaroka lehibe: famaritana sy sary avy amin'ny karazana malaza
Pumpkin dia fitaovana tsy manam-paharoa, ilaina ho an'ny zazakely sy ny sakafo ara-tsakafo, fitahirizana sakafo, vitamina sy microelements. Eo amin'ny latabatra, karazana karazana jono telo no tena voajanahary: ny tavy, ny voankazo ary ny maina. Miankina amin'ny tsiron'ny pulp, ny haben'ny voankazo sy ny fahamendrehan'ny hoditra.
Fitomboan'ny lagenarii ao an-jaridaina: maniry sy mikarakara tavoahangy tavoahangy
Ny zavamaniry misy anarana tsy mahazatra dia manana toetra tsy mahazatra farafaharatsiny. Tsy ampiasaina amin'ny sakafo fotsiny izy io, fa ny voany dia nesorina amin'ny ampahany, fa izy ireo kosa dia manana endrika hafahafa. Tsy ny mpamboly rehetra no maka ny fambolena lagenaria, fa tsy ny rehetra no mahalala hoe inona izany. Fa ny vokatry ny asa dia mahagaga foana. Lagenaria: famaritana ny kolontsaina. Maro no mahafantatra ny Lagenaria amin'ny anarana hafa: Vazimba Vietnamiana, kukumber indianina, calabash, tavoahangy, tavoahangy tavoahangy ary ny hafa.
Belmu eo amin'ny mason'ny omby: famantarana sy fitsaboana
Kanareechnik, na faryaris reed reed: famaritana sy fambolena
Hazo fofona maitso: famaritana voasokajy, fitazonana sy fambolena
Famerenam-bidy ny famaritana ny pelargonium
Ireo singiolary maniry hongroà Hongroà
Mirakitra zava-pisotro misy alikaola - avy amin'ny inona no manampy, ahoana no fomba fitsaboana sy ny fomba hanitsiana ny tenanao?
"Shining-2": torolàlana momba ny fampiasana ny zava-mahadomelina
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Vokovoko matevina